Markasta waxaad maddadaalo ka dhigataa farxadda dadka kale..! | XORRIYA NEWS
Home Aqoon Guud Markasta waxaad maddadaalo ka dhigataa farxadda dadka kale..!
Markasta waxaad maddadaalo ka dhigataa farxadda dadka kale..!
Nin barafasoor ah iyo ardaygiisii oo meel kayn ah maja-baxsanaya ayaa waxa ay arkeen nin faqiir ah oo xaabo guranaya kabihiisina iska siibay oo meel dhigtay. ardaygii ayaa yiri macallin waxaan ku maddadaaloono ayaan inoo hayaa ka warran haddaan ninkaas kabaha ka qarinno ka dibna ka dhuummano dushana ka eegno bal waxa uu sameeyo marka uu kabaha waayo.
Barofosoorkii ayaa yiri maandhow dadka danyarta ah marka ay khasaaraan facelin cajiib ah ma sameeyeen waxayse si cajiib ah uga falceliyaan marka wax aysan filayn helaan ee ka warran haddaan labo shilin labada kabood ugu ridno oo eegno bal waxa uu sameeyo. Sidaas ayayna sammeeyeen oo labo shilin ayay midba kab ugu rideen meel u dhow ayayna isku qariyeen.
Ninkii xaabadii ayuu soo gurtay kabihisii buuna u yimi markuu damcay inuu illado ayuu arkay in middiiba hal shilin ku jiro hareeraha ayuu eegay mise cidna ma joogto.
Kadib ninkii waxa uu u mahadceliyay cid uusan arkayn “Waa ku mahadsantahay caawimaddaada hadda waxa aan awoodaa in aan xaaskayga dhakhtar geeyo ilmahayga rooti u gado” intaas ayuu yiri oo lacagtii iyo xabadii qaatay.
Macallinkii ayaa arkay ardaygii oo faraxsan oo dhoolla cadaynaya markaas ayuu ku yiri si fiican ayaynu u maddadaaloonay oo hadda waan faraxsanahay markasta waxaad maddadaalo ka dhigataa farxadda dadka kale.